Septambra 29, 2019
Ny zava-drehetra momba ny Trestolone Acetate (MENT)
1.Inona ny Trestolone Acetate (MENT)? 2. Ahoana ny fiasan'ny Trestolone Acetate?
3.Ises ny Trestolone Acetate (MENT) 4.Trestolone Acetate (MENT) fatra
5.Trestolone Acetate (MENT) tapany aina 6.Trestolone Acetate (MENT)
7.Trestolone Acetate (MENT) valiny 8.Trestolone Acetate (MENT) amin'ny fanapahana
9.Trestolone Acetate (MENT) ho an'ny fanenoman-tena 10.Trestolone Acetate (MENT) dia mahazo tombony
11.Trestolone Acetate (MENT) hevitra 12.Trestolone Acetate (MENT) amidy amidy
13.Aiza no hividy vovoka Trestolone Acetate (MENT)
1.Inona ny Trestolone Acetate (MENT)?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5, fantatra ihany koa amin'ny hoe7 alpha-methyl-nortestosterone (MENT powder) dia steroid synthetic mahery indrindra izay matanjaka lavitra noho ny testosterone. Ny steroid dia ampiasaina ho an'ny tanjon'ny bodybuilding ary koa ny fampiofanana ara-tanjaka. Io steroid io dia mety ho ampiasaina amin'ny fepetra fanabeazana aizana lahy. Ny steroid dia miteraka tsy fahatomombanana vetivety amin'ny lehilahy raha toa ka asiana be dia be.
Trestolone Acetate (MENT)6157-87-5) dia inoana fa avo folo heny mahery kokoa noho ny testosterone, ary vokatr'izany dia nahazo laza tsara izy nandritra ny taona maro. Izy io dia tanterahana amin'ny fomba maro toy ny vovony na tsindrona. Ity steroid ity dia mahasoa kokoa amin'ny mpanamboatra bodybuilders izay nanolo-tena maniry ny hahazoana vokatra tsara amin'ny fampifangaroana ny steroid miaraka amin'ny fitsipi-piainana ara-pahasalamana ho an'ny fitsinjaram-peo ary koa ny fanampina.
2.Hinona no miasa ny Trestolone Acetate?
Ny Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 dia manampy ireo mpanao bodybuilders mampiakatra ny hozatra ary hampihena ny tavy amin'ny fotoana mitovy. Mba hahatratrarana vokatra tsara indrindra dia afaka mitambatra miaraka amin'ireo mpisondrotra hafa miaraka amin'ny fanamafisana sy fanesorana ny vatana ny steroid. Ny steroid dia miteraka tsy fahampiana amin'ny alàlan'ny fanakanana ny famotsoran-keloka gonadotropins amin'ny glandy pituitary.
Ny steroid koa dia misakana ny famoahana ny gonadotropins, ny fanentanana ny follicle hormonina ary ny hormonina luteinizing na dia kely fotsiny aza. Ny hormonina manaitaitra mena (FSH) sy ny hormonina Luteinizing (LH) dia takiana amin'ny fizotran'ny spermatogenesis, fomba iray anaovana fitsapana mamokatra spermatozoa.
Rehefa esorina ny famoahana LH sy FSH dia tsy mandeha ny spermatogenesis. Manakana ny famokarana sperma sy manakana ny famokarana testosterone ny fanamafisana ny LH. Ny vovony MENT dia fitsaboana fanoloana mety ho an'ny ankamaroan'ny fiasa izay miankina amin'ny androgen. Fandinihana lalina momba ny Superdrol (Methasterone) ho an'ny fanabeazana bodyguide
3.Ises ny Trestolone Acetate (MENT)
Tsy toy ny steroid anabolika hafa izay manana ny lazan'izy ireo amin'ireo mpivarotra tsena mainty na amin'ireo orinasa mpandray anjara amin'ny counter supplement, Trestolone Acetate dia manana ny lazany amin'ny fikarohana ara-pitsaboana ara-pahasalamana ara-tsiansa, izay mahatonga azy ho be mpitia eo amin'ireo vondron-tsindry. MENT no vokarina voalohany tany 1960
Vao haingana i Schering, orinasa iray fanafody miorina amin'ny fikarohana sy ny Council Council dia nametraka fahalianana amin'ny famokarana ity steroid ity taorian'ny fikarohana nataon'izy ireo tamin'ity steroid ity ho an'ny tanjon'ny fitsaboana fanabeazana zaza ary ny fanoloana ny hormonina. Ireo orinasa ireo dia nahita toetra tsy manam-paharoa amin'ny steroid mety amin'ny fanatanjahan-tena. Ho fanampin'izany, ity steroid ity dia mahasoa be amin'ny fitsaboana fanoloana androgen.
Afa-tsy ny fitsaboana fanolo ny fanabeazana aizana sy ny fanabeazana aizana, toy ny fiomanana intramuscular na amin'ny hoe transdermal dia misy Trestolone Acetate hafa (ara-) fampiasana anisan'izany ao amin'ny hypogonadism voalohany, sola, fahaverezan'ny taolana, kanseran'ny prostate, tsy fahombiazan'ny testicular, BHP, ASIH, sarcopenia, cachexia ary hozatra ny hozatra ary koa fanatsarana ny fanatanjahan-tena sy fananganana vatana.
4.Trestolone Acetate (MENT) fatra
Hatramin'ny tsy nanakalozana fivarotana zava-mahadomelina toy ny zava-mahadomelina ny MENT, dia tsy nisy namorona manokana Trestolone Acetate (MENT) fatra toro-lalana ho an'ny steroid. Amin'ny maha-steroid mahery vaika loatra, dia hisy heriny kely ho an'ny mpamorona vatana. Ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny fanafody dia avo folo heny mahery kokoa noho ny testosterone ary manakana ny spermatogenesis roa-polo mahery noho ny testosterone.
Vokatr'izany, ny fatra amin'ny ambany 10mg (mahazatra 3-16mg) isan'andro dia mahomby ho an'ny ankamaroan'ny vao manomboka. Ny tsindrona vita amin'ny menaka amin'ity fanafody ity dia mety ho raisina an-tsokosoko ny 10-20mg miaraka amin'ny elanelan'ny roa na telo andro. Ny olona sasany dia mety mieritreritra dosage mihoatra ny 10mg isan'andro mba hahazoana valiny Trestolone Acetate (MENT) tsara satria tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina.
Ny olona samy hafa dia manana ambaratonga samihafa amin'ny fahatsapana ny progestational sy ny fananana estrogen. Ny fatra avo dia tsy omena izany satria mety hitarika fiantraikany ratsy.
Ireo mpampiasa Trestlone za-draharaha dia mety mampiasa dosage 20-50mg isan'andro. Na izany aza, mety tsy mitovy amin'ny endrika izay itondrana azy. Ohatra, ny endrika injectable dia mety ho kely kokoa noho ny endrika transdermal sy am-bava. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, na izany aza, ny fanafody dia tsy mitantana am-bava; ny tsindrona sy ny vahaolana transdermal dia arotsaka ho fomba tsara indrindra hanatanterahana ity fanafody ity. Mba hampihenana ny fiantraikan'ny fiantraikany estrogen sy ny prolactin dia tsara kokoa ny mampiasa ny steroid miaraka amin'ny prolactin inhibitors toa an'i Cabergoline sy ny aromatase inhibitor toy ny Arimidex.
Ny mpampiasa sasany za-draharaha dia mety maka dosage 50-75mg isan'andro mandritra ny tsingerin'ny 4 herinandro. Ireo mpampiasa ireo dia tokony hizara ny fatra amin'ny fizarana roa, izany hoe iray alohan'ny hatory ary ny iray aorian'ny mifoha. Mety haka dosage hatramin'ny 75-100mg ny manampahaizana. Ny fatra iray toy izany dia azo zaraina ho ampahany telo, araka ny aseho eto ambany:
Talohan'ny fiasana- 25-50mg
Alohan'ny hatory na amin'ny alina- 25mg
Ilaina ny fomba fiasa feno rehefa eo ambanin'ny fatran'ny Trestolone Acetate ary hahazoana vokatra mahomby. Ny iray noho izany dia mila hitazomana ny sakafo tsara hanala ny tavy sy ny fametrahana ny hozatra. Zava-dehibe ny hitazonana ny fanazaran-tena mahomby amin'ny asa fanaovan-tena ary koa ny fampiasana tsy tapaka izay manaraka ny valin'ny fatra mety ho valiny mahomby ary mampihena ny fiantraikany.
5.Trestolone Acetate (MENT) tapany aina
Ny antsasaky ny steroid iray dia manondro ny fotoana nalain'ny vatana mba hampihenana ny zava-mahadomelina ary manafoana ny antsasaky ny vola nalainy. Trestolone Acetate ny fiainana antsasaky ny ora manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo (ora 8-12).
Vokatr'izany dia afaka maka ny zava-mahadomelina amin'ny fatra kely mandritra ny andro ny olona iray, izay miantoka fa ao anaty ra foana izy io. Ireo fatra ireo dia mety ho raitra roa eo anelanelan'ny telo ao anatin'ny iray andro. Vokatry ny fiovaovan'ny zava-mahadomelina amin'ny ra, dia ilaina ny ahafahan'ny mpampiasa manisa ny antsasaky ny zava-mahadomelina. Hanampy ny mpampiasa handray ilay zava-mahadomelina amin'ny fatra ara-potoana izany.
Raha ohatra, ny iray manapa-kevitra ny handray 50mg isan'andro, amin'ny tsingerin'ny efatra herinandro, ary araka ny fiheverana fa ny zava-mahadomelina dia manana ny antsasaky ny fiainana 8hours, ny fiovan'ny fifantohana amin'ny ra dia mety ho toy izao manaraka izao:
Amin'ity fatra ity, ny olona iray dia mety haka ny fanafody ao anaty elanelan'ny 8 ora iray an'ny 25mg tsirairay. Raha manomboka amin'ny 6 AMO ny fatra dia mihena 12.5mg ny fifantohana aorian'ny ora 8 (2 PM) rehefa atao ny fepetra faharoa. Ny fatra faharoa dia misy 25mg, izay hampiakatra ny fifantohana amin'ny 37.5mg.
Valo ora aorian'ny fisian'ny dosage faharoa (10 PM) dia ny 18.75mg ny fifantohana. Vata ora taty aoriana, dia ho 6 AM ny ampitso, rehefa alaina ny fatra voalohany amin'izany andro izany. Midika izany fa ny dosage voalohany amin'ny andro faharoa dia hatao rehefa ny vatana dia misy fiheverana ny 9.4mg manomboka amin'ny andro teo aloha.
Ny modely toy izany dia miantoka ny fifindran'ny tsy tapaka eo amin'ny steroid amin'ny ra ao aorian'ny sy aorian'ny fanazaran-tena. Ny fahafantarana ny kajy ny Trestolone Acetate (MENT) ny antsasaky ny fiainana amin'ny zava-mahadomelina dia manampy ireo mpampiasa mba hiantoka fa ny fifantohana n ny zava-mahadomelina dia avo fotsiny mandritra ny fotoan-tsarotra indrindra, izay taloha, sy aorian'ny fanazaran-tena. Ny fanaovana kajy tena mety amin'ny Trestolone Acetate (MENT) dia manampy ny mpampiasa hitantana ny fatrany ary hahitana valiny mahasoa.
6.Trestolone Acetate (MENT)
Ny olona samy hafa dia mety mampiasa fihodinana isan-karazany rehefa miresaka Trestolone Acetate. Miankina betsaka amin'ny traikefan'ny olona amin'ny fanafody izany. Tokony ho fantatry ny iray ihany koa ny fiantraikan'ny fihodin'izy ireo, miankina amin'ny tanjon'izy ireo sy ny tanjony alohan'ny hanaovana ny tsingerin-taona tsirairay.
Rehefa miditra tsingerina ianao dia ilaina ny mandinika ny halavan'ny fihodinana ary koa ny fifantohan'ny zava-mahadomelina amin'ny ra mandritra ny tsingerin-taona. Miaraka amin'ny tanjona tsara, dia mora ny mifidy izay mety indrindra Tsingerin'ny Trestolone Acetate (MENT) manolo-tena. Miaraka amin'ny Trestolone Acetate, dia afaka mahazo valiny tena izy na dia misy tsingerin'ny herinandro roa aza. Na izany aza, ny fihodinana mety indrindra dia tokony hihazakazaka mandritra ny efatra na enina herinandro. Tena tsingerin'entana tsara izy io satria misakana ny fatran'ny fatrany.
7.Trestolone Acetate (MENT) valiny
Trestolone Acetate dia steroida tena be hery izay nahazo laza noho ny fiantraikany mahery vaika. Iray amin'ireo lafin-javatra, nahoana ny olona maro no mihevitra an'io steroid io, dia noho ny vokatra mandaitra vitany ao anatin'ny fotoana fohy. Ny zava-mahadomelina dia manana vokatra mahery eo amin'ny olona mitady hahatratra fanamafisana tanjaka haingana.
Ireo vao manomboka mampiasa io zava-mahadomelina io dia mahazo valiny voamarika na dia fohy aza amin'ny roa herinandro nefa tsy mifikitra. Noho ny fahaizany avo, ny mpampiasa dia mahazo tombony hozatra sy fatrany lanja amin'ny lanjany na dia kely aza amin'ny 3-6mg. Ny valin'ny fitomboan'ny hozatra dia maharitra ela ihany koa, izay mahatonga ny mpanao fanatanjahantena sy ny mpanentana ny lanjan'ny fiheverana an'io zava-mahadomelina io.
Ny olon-tsotra ankoatry ny bodybuilders dia afaka mampiasa io zava-mahadomelina io ihany koa mba hahatratrarana vatana iray manintona. Ireo vokatra ireo dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fanazaran-tena amin'ny fomba fiasa tsara sy ny fihinanana sakafo mety. Manome hery bebe kokoa ho an'ny mpampiasa ny zava-mahadomelina amin'ny fanazaran-tena, izay mitaky fanandratana avo lenta.
Ny fahaizan'i Tretolone acetate poids hanafoanana ny famoahana ny steroid amin'ny fifehezana ny fizotran'ny spermatogenesis dia mahatonga ny zava-mahadomelina ho an'ny fifehezana ara-pitsaboana ho an'ny lehilahy.
8.Trestolone Acetate (MENT) amin'ny fanapahana
Trestolone Acetate dia manome fanafody mahasoa ho an'ny olona te-hanapaka. Ny fampihenana ny Trestolone Acetate (MENT) dia ahafahan'ny mpanentana lanja sy mpamorona bodybuilder hampihenana tavy betsaka amin'ny vatany nefa tsy voatery hoe be loatra ny hozatra. Mba hahatratrarana faingana miadana miaraka amin'ny fombafomba mahafinaritra, Trestolone Acetate dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa hanatsarana ny valiny amin'ny fihodinan'ny Trestolone Acetate (MENT) miankina amin'ny valim-pitiavana ary koa ny fahatsapan'ny progestational sy ny fametavetana.
Ireo haingam-pandeha amin'ny Trestolone dia afaka mametraka an'i Winstrol amin'ny androgen tsy misy fofona toy ny Halotestin na trenbolone. Ny fampifangaroana toy izany dia hanampy ny olona iray hahatratra famaritana mafy ny vatana sy ny masculinity mafy izay tadiavin'ny ankamaroan'ny bodybuilders. Ireo olona manana fahatsapana avo kokoa dia mety hieritreritra ny hanisy fatra toy ny Deca-Durabolin, Equipoise na primobalin rehefa mametaka Trestolone acetate.
9.Trestolone Acetate (MENT) ho an'ny fanenoman-tena
Trestolone dia afaka mifatotra miaraka amin'ny steroid hafa ho an'ny bulking. Tranozo vovoka Trestolone Acetate (MENT) amin'ny ankapobeny dia mikendry ireo olona izay maniry ny hampitombo ireo hozatra fitomboan'ny hozatra, hatrany amin'ny fanazaran-tena sy fanazaran-tena maharitra sy fanazaran-tena. Matetika indrindra, ny ezaka hampihena ny tavy amin'ny vatana dia mety hiteraka fihoaram-pefy izay mety hiteraka hozatra. Trestolone, rehefa ampiarahina amin'ny steroida mety, dia mety hanamora ny fatiantoka amin'ny vatana, mihazona ary manamora ny fahazoana fazatra hozatra ary mamela ny vatana hanana angovo sy hery hiaretana fanazaran-tena bebe kokoa sy henjana.
Indraindray dia mety hasiaka be ny olona izay mitady vokatra haingana amin'ny fotoana fohy. Ny fihodinana miompana toy izany dia mety hanome ny mpampiasa be lavitra be indrindra amin'ny mpampiasa, izay ahitana ny fitazonana rano. Ireo vokatra ireo anefa dia mety tsy haharitra ela. Ny sasany amin'ireo steroida azo fehezina miaraka amin'ny Trestolone Acetate (MENT) ho an'ny tsingerina an'habakabaka dia i Dianabol, Anadrol, ary Trenbolone.
Dianabol dia iray amin'ny steroida izay heverina ho be dia be noho ny fahaizany mihetsika avy hatrany ary manome tombony haingana ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fanakatonana ny Trestolone miaraka amin'i Dianabol dia mety hihoatra ny lanjan'ny hozatra 20 ao anatin'ny herinandro 6. Mahazo tombony ihany koa i Dianabol satria matavy be sy be ary tsy misy tsindrona.
Deca-Durabolin, fantatra ihany koa amin'ny hoe Nandrolone, dia ampiasain'ny olona maro izay mitady fanasitranana haingana sy fanasitranana hozatra. Izy io dia mahasoa amin'ny fitsaboana fiodin'ny postinganô, satria mampihena ny fitrandrahana angovo. Ity steroid ity dia misy fiatraikany ambany indrindra ary azo ampiasaina tsara miaraka amin'ny androgen steroid toy ny Dianabol.
Trenbolone dia manana tanjaka malefaka sy fahamaotinana ary ampiasaina ho an'ny tsingerin'ny bulking ho an'ny vatana vatana marefo ho an'ny fanapahana. Na dia manana tanjaka be aza izy io, dia tsy mety ho tombony ho an'ny bodybuilders mavesatra izay manomana fifaninanana. Na izany aza, na izany aza, dia apetraka amin'ny tsingerin-jaza mpaka loha.
10.Trestolone Acetate (MENT) dia mahazo tombony
Trestolone acetate dia mivoaka eny an-tsena noho ny habeny izay nohamafisin'ireo mpandinika mpitsabo ary fantatra ihany koa noho ny hentitra momba ny kalitao. Trestolone acetate dia manana tombony maro isan-karazany, indrindra ho an'izay olona mitady ny hanatsara ny vatany ary hahatratra ny tanjony ara-batana. Ity no fahazoan-dàlana ambony indrindra hanampiana ny fivoaran'ny hozatra ary koa ny fihenan'ny lanjany. Ny steroid dia mamela ny mpampiasa azy hanana vatana matavy sy manome voninahitra miaraka amin'ny fahazoana hozatra farany. Ny sasany an-tampony Mahazo tombony amin'ny Trestolone Acetate (MENT) mifandraika amin'ny Trestolone acetate dia misy:
· Trestolone acetate dia fantatra fa miasa haingana kokoa noho ny steroid hafa. Ny acetate Trestolone dia manome valiny haingana avy hatrany taorian'ny tsindrona. Ny mpampiasa dia nitatitra fiovana lehibe eo amin'ny hozatra vatana taorian'ny nakana ny fatra. Ny mahavariana dia maharitra ela ny valiny, ary tsy mila miahiahy ireo mpampiasa intsony ny manindrona ny tenany mba hitazonana ny hozeliny. Ny zava-mahadomelina dia manolotra in-droa ny androbe testosterone kokoa izay mampitombo ny tahan'ny fananganana hozatra kokoa noho ny steroid hafa ao an-tsena.
· Trestolone acetate dia azo ampiasaina ho fanafody hafa hanilihana ary manatsara be ny fahaizany manao ny fanapahana. Ny zava-mahadomelina dia manana fananana tsy manam-paharoa toy ny fametrahana ny prohormones hafa izay manampy amin'ny fanatsarana ny fihodinan'ny fahatapahana, noho izany dia miasa tsara indrindra amin'ny olona izay manaisotra ireo tavy mipaka ary mandoro tavy.
· Ny acetate trestolone dia nanaporofo fa ilaina amin'ny fihodinana feno fihodinana. Ny zava-mahadomelina dia mamela ny mpampiasa azy hanana tahiry fihazonana ny azotazy avo lenta izay manampy azy ireo hampivoatra ny hozatra. Manatsara ny zava-mahadomelina koa ny fitazomana ny bodybuilders amin'ny sehatry ny anabolic.Ny toro-làlana farany ho an'ny Nolvadex mba hanasitranana ny homamiadana
· Ny fampiasana Trestolone acetate dia mampitombo ny fahafahan'ny vatana manamboatra proteinina. Vokatr'izany dia mihamitombo haingana ny hozatra hozatra ny zava-mahadomelina satria ny proteinina dia manakana ny tranon'ny vatana.
· Manatsara ny haavon'ny hery ny fanafody. Ny fitomboan'ny tanjaka dia manampy ny mpampiasa hampitombo ny fahaiza-manao fanazaran-tena ary hihamafy kokoa. Ankoatr'izay, ny fisondrotam-pahefana mahery vaika dia manampy ireo mpanao bodybuilders hampihenana ny fahatapahany, ka manampy azy ireo hiasa matetika.
· Tsy toy ny fanafody hafa trestolone Acetate tsy niova ho estrogen. Manimba ny voka-dratsin'ny vatan'ny lehilahy ny estrogen, toy ny fitrandrahana erectile, havizanana ary fahaverezan'ny hozatra. Na izany aza, ny MENT indray mandeha dia nilalao ny toeran'ny testosterones tao amin'ny vatan'ny mpampiasa ary noho izany dia nitahiry ny voka-dratsy vokatry ny estrogen.
· Tsy toy ny steroida maro ihany koa, ny fanafody dia tsy miova amin'ny DHT. Ary koa, ny steroid dia nitombo be dia be satria tsy mifamatotra amin'ny firaisana hormonina mitambatra globulin (SHBG).
11. Hevitra Trestolone Acetate (MENT)
Trestolone Acetate dia fantatra hatrany ho toy ny steroid anabolika mahery vaika sy mandaitra. Betsaka ny olona efa nampiasa zava-mahadomelina Trestolone Acetate fananganana vatana ho an'ny fananganana hozatra ary koa ho an'ny antony ara-pitsaboana. Ny olona toy izany dia naneho ny fahafaham-pony amin'ny zava-mahadomelina tamin'ny alàlan'ny fijerena ny mpanjifa tsara. Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo fijerin'ny mpampiasa nosoratan'ireo mpampiasa toy izao:
Nick dia mpanao fitaovam-piadiana 27 herintaona ary mpiasan'ny vatan'ny Trestolone vinavina ho an'ny fanatanjahan-tena. Nampiasa an'io vokatra io i Nick nandritra ny valo volana, ary faly izy tamin'ny valiny. Milaza izy fa ny fanafody dia nanome valiny araka izay tiany. I Nick dia manohy miha-mavesatra hozatra fa tsy misy fiantraikany. Faly izy fa ny zava-mahadomelina dia tsy nanome fahazotoan-komana azy, fikapohana rivotra. Ny hany olana nisedra an'i Nick tamin'ity steroid ity dia ny hatsembohan'ny alina sy ny tsy fahasalamana. Amin'ny maha-bodybuilder vazaha azy dia zatra amin'ny lafiny toy izany i Nick ary tsy nahita azy ireo nanamafy.
Greg dia mpampiasa Trestolone sambatra hafa ho an'ny fananganana vatana. I Greg dia efa nampiasa an'io zava-mahadomelina io ary izao dia eo amin'ny antsasaky ny fihodiny faharoa taorian'ny fitsaboana fitsaboana tsingerin-taony. Tamin'ny fihodinanany faharoa izy dia notebitebanana izy ary tena tsara ny vokatra. Mikasa ny hanomboka ny fanapahana raha toa ka hiatrika an'io fihetsehana io i Greg. Nilaza i Greg fa tsy mahalala vahana izy tamin'ny voalohany ary natahotra izy fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny vatany ny zava-mahadomelina. Gaga izy fa nivadika ho iray amin'ireo tsara indrindra ampiasainy hatramin'izay. Nanome azy tanjaka avo, malefaka tena tsara izy, ary nahafahany nanangana hozatra lehibe. Faly be i Greg noho ny zava-mahadomelina ary nilaza izy fa hanoro izany ho an'ny olona rehetra.
Mahatsiaro ho gaga i Clinton nizara ny traikefany tamin'ny Trestolone Acetate noho ny valiny tsara azony azony nandritra ny fotoana fohy sy fatra kely amin'ity fanafody ity. Clinton dia tsy mpitazona mavesatra na mpanamboatra vatana fa kosa mpamolavola lamaody amin'ny finiavan-doha sy filanjana vatana. Efa ho herintaona izy no nampiasa an'io zava-mahadomelina io, ary faly be izy fa ankoatran'ny fahazoana hozatra malefaka sy vatana milamina tsara, ny fanafody koa dia nanampy azy hanatsara ny libido, ny fahasalamana ary ny hoditra malama. Ny fanafody koa dia nanampy azy hampihena ny tavy amin'ny vatana, izay tena mahafaly azy. Clinton dia mikasa ny hanohy an'io fanafody io satria tsy manana izy ary misy olana aminy.
12.Trestolone Acetate (MENT) amidy amidy
Ny mpanamboatra Trestolone Acetate dia niantoka fa ny vokatra dia avo kalitao. Na izany aza, mbola betsaka ny olona eo amin'ny tsenan'ny mainty sy ny labera ambanin'ny tany izay mivarotra vokatra ambany sy ambany ny vidiny. Ny fitrandrahana Trestolone Acetate ambany kalitao dia mety hiteraka voka-dratsy ratsy toy ny homamiadana prostate. Noho izany, ny mpividy sy ny mpampiasa ity vokatra ity dia mila mitandrina mandritra ny fividianana Trestolone Acetate (MENT) vovoka amidy.
Noho ny lazany sy ny fitomboan 'ny mponina izay manome lanja sy te hahatratra ny tanjaka ara-batana, dia afaka miditra any aminà toerana isan-karazany ny zava-mahadomelina. Ny tombony fanampiny amin'ny zava-mahadomelina dia ny hoe misy amin'ny vidiny mirary kokoa noho ny steroida hafa. Ho an'ireo mpividy mitady ny hividy ny vovony amin'ny fidiram-bolany dia lafo. Ny vokatra dia amidy amina dikan-teny roa, dia ny menaka madio efa mifangaro ao anaty 100mg / ml ary ny vovony 99% Trestolone Acetate madio.
13. Aiza no hividy vovoka Trestolone Acetate (MENT)
Trestolone Acetate dia azo alaina amin'ireo mpivarotra iraisam-pirenena izay azo aleha amin'ny toerana samihafa eran-tany toa an'i China, Etazonia, Canada, Brazil, ary Mexico. Ireo mpivarotra iraisampirenena ireo dia nampahafantatra an'io varotra io tamin'ny tranonkalany mba hahafahan'ny mpividy mividy azy ireo eo amin'ny lampihany.
Ary azonao atao koa mividy vovony Trestolone Acetate (MENT) avy amin'ny tranonkala an-tserasera hafa amin'ny vidiny mirary, ny iray dia afaka mividy Trestolone Acetate (MENT) amin'ny ampahany betsaka amin'ny mpivarotra eto an-toerana saingy efa nampitandremana ianao amin'ny fisavana momba ny kalitao raha mividy ny vokatra eo an-toerana rehefa feno olona ny mpivarotra. Matetika ny mpividy dia mividy ny vokatra amin'ny tranokalan'ny orinasa miorina fa tsy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera hafa ary Trestolone Acetate (MENT) mpamatsy hahazoana antoka fa hahazo vokatra tsara izy ireo.
Trestolone dia nahazo laza tena azo itokisana amin'ny fananganana vatana sy tanjona ara-pitsaboana hafa, toy ny fanabeazana aizana ny lahy. Io zava-mahadomelina io dia mijanona eo amin'ny sehatry ny tsiranoka betsaka indrindra amin'ny tsena miaraka amin'ny lazany. Ny zava-mahadomelina dia manana tombony betsaka ho an'ny mpampiasa, ary tena mahasoa. Ny mpampiasa an'io zava-mahadomelina io dia tokony hitandrina ny fandaharam-potoanany, ny kajy antsasaky ny fiainana, ary koa ny fitazonana ny fanazaran-tena sy ny sakafo mety. Raha mikasa ny hividy Trestolone ho an'ny fananganana bodybuilding ianao dia afaka mitsidika ny tranokala buyaas.com hametraka ny baikonao sy hanontanianao fanazavana fanampiny.
2. Elks; Ny dikantenin'ny zava-mahadomelina; Data momba ny simika: Data simika, lamina, ary bibliografia. (2014) p.538, 588
3. Legato Marianne; Ny fitsipiky ny fitsaboana ho an'ny miralenta, (2009) p.363
4. Yalkowsky Samuel, He Yan, Jain Parijat; Taratasy ny angon-drakitra fampandehanana akora mampino